१ कोरिन्थी १० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ कोरिन्थी १०:१-३३
१० ए भाइहरू हो, तिमीहरू यस विषयमा अनजान रहो भन्ने म चाहन्नँ, हाम्रा पुर्खाहरू सबै बादलमुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए २ अनि मोशाको पछि लाग्दा सबै जनाको बादल र समुद्रद्वारा बप्तिस्मा भयो। ३ अनि सबैले परमेश्वरले दिनुभएको एउटै भोजन खाए ४ र सबैले परमेश्वरले दिनुभएको एउटै पानी पिए। तिनीहरू आफ्नो पछि-पछि लागेको त्यस चट्टानबाट पानी पिउँथे, जुन परमेश्वरले दिनुभएको थियो र त्यस चट्टानले ख्रीष्टलाई सङ्केत गर्थ्यो। ५ यद्यपि, तिनीहरूमध्ये धेरैजसोसँग परमेश्वर खुसी हुनुभएन। त्यसैले तिनीहरू उजाडस्थानमा मरे। ६ अब तिनीहरूजस्तो हानिकारक कुराहरूको लालसा गर्ने मानिसहरू हामी हुनुहुँदैन भनेर यी कुराहरू हाम्रो लागि उदाहरण भए। ७ तिनीहरूमध्ये कोही-कोही मूर्तिपूजक बनेजस्तो हामी नबनौं, जस्तो लेखिएको छ: “मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि रमाइलो गर्नलाई उठे।” ८ तिनीहरूमध्ये कोही-कोहीले अवैध यौनसम्बन्ध राखे र एकै दिनमा तेइस हजार मारिए; हामीचाहिं तिनीहरूले जस्तो अवैध यौनसम्बन्ध नराखौं। ९ तिनीहरूमध्ये कोही-कोहीले यहोवाको परीक्षा लिएकाले सर्पहरूद्वारा नाश भएका थिए; हामीचाहिं उहाँको परीक्षा नलेऔं। १० तिनीहरूमध्ये कोही-कोहीले गनगन गरेकाले नष्टकारीद्वारा नाश भएका थिए; हामीचाहिं गनगन गर्नेहरू नहोऔं। ११ अब यी कुराहरू उदाहरणको रूपमा तिनीहरूमाथि आइपरे अनि यस युगको अन्तमा बाँचिरहेका हामीहरूकै चेतावनीको निम्ति ती लेखिए। १२ यसकारण जसले आफू खडा छु भनी सोच्छ, ऊ होसियार रहोस् नत्र त ऊ लड्नेछ। १३ साधारणतया सबै मानिसहरूलाई आइपर्ने परीक्षाबाहेक अरू परीक्षामा तिमीहरू परेका छैनौ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र तिमीहरूले सहनसक्नेभन्दा बाहिरको परीक्षामा उहाँले तिमीहरूलाई पर्न दिनुहुनेछैन, बरु तिमीहरूले त्यो सहन सकोस् भनेर परीक्षाका साथसाथै त्यसबाट उम्कने बाटो पनि खोलिदिनुहुनेछ। १४ त्यसैले ए मेरा प्रियहरू हो, मूर्तिपूजाबाट भाग। १५ समझ भएका मानिसहरूसित बोलेझैं म तिमीहरूसित बोल्दैछु; म के भन्दैछु तिमीहरू आफै फैसला गर। १६ जुन आशिष्‌को कचौराको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौं, के त्यो ख्रीष्टको रगतको भागीदार हुनु होइन र? जुन रोटी हामी भाँच्छौं, के त्यो ख्रीष्टको शरीरको भागीदार हुनु होइन र? १७ किनकि रोटी एउटै छ, हामी धेरै जना भए तापनि एउटै शरीर हौं, किनकि हामी सबैले त्यही एउटै रोटी खाँदैछौं। १८ जो जन्मजात इस्राएलीहरू हुन्‌, तिनीहरूलाई हेर: बलि चढाइएका थोक खानेहरू के वेदीका भागीदारहरू होइनन्‌ र? १९ त्यसोभए म के भनौं? मूर्तिलाई बलि चढाइएका थोकहरू केही हुन्‌ र? वा मूर्ति केही हो र? २० होइन। तर म भन्छु, अन्यजातिले जे बलि चढाउँछन्‌, त्यो परमेश्वरलाई नभई दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई चढाएका हुन्‌। अनि तिमीहरू दुष्ट स्वर्गदूतहरूको भागीदार होओ भन्ने म चाहन्नँ। २१ तिमीहरूले यहोवाको कचौराबाट पिउने अनि दुष्ट स्वर्गदूतहरूको कचौराबाट पनि पिउने गर्न सक्दैनौ; तिमीहरूले “यहोवाको टेबुलबाट” खाने अनि दुष्ट स्वर्गदूतहरूको टेबुलबाट पनि खाने गर्न सक्दैनौ। २२ वा “के हामीले यहोवालाई डाही बनाइरहेका छौं”? के हामी उहाँभन्दा बलिया छौं र? २३ सबै कुरा न्यायसङ्गत छन्‌ तर सबै कुरा फाइदाजनक छैनन्‌। सबै कुरा न्यायसङ्गत छन्‌ तर सबै कुरा उत्थानदायी हुँदैनन्‌। २४ हरेकले आफ्नो होइन तर अर्को मानिसको फाइदा खोज्ने गरोस्। २५ मासु-बजारमा जे बेचिन्छ, आफ्नो अन्तस्करणको खातिर केही सोधपुछ नगरी त्यो खाओ। २६ किनकि “पृथ्वी र यसमा भएका सबै थोक यहोवाकै हुन्‌।” २७ यदि बेग्लै आस्था भएकाहरूमध्ये कसैले तिमीहरूलाई निम्तो दियो र तिमीहरूलाई जाने इच्छा भयो भने तिमीहरूसामु राखिएका सबै थोक आफ्नो अन्तस्करणको खातिर केही सोधपुछ नगरी खाओ। २८ तर यदि कसैले तिमीहरूलाई “यो बलि चढाइएको खानेकुरा हो” भन्यो भने त्यो कुरा बताउने मानिसको खातिर र अन्तस्करणको खातिर नखाओ। २९ “अन्तस्करण,” हो, मैले तिम्रो होइन तर अरूको अन्तस्करणको कुरा गरेको हुँ। किनकि मेरो स्वतन्त्रताको न्याय अर्को मानिसको अन्तस्करणले किन गर्ने? ३० यदि म धन्यवाद चढाएर खान्छु भने जे कुराको लागि म धन्यवाद चढाउँछु, त्यसैको लागि म किन निन्दित हुने? ३१ त्यसकारण, चाहे तिमीहरू खाओ वा पिओ वा अरू जेसुकै गर, सबै थोक परमेश्वरकै महिमाको निम्ति गर। ३२ यहूदीहरूका साथै ग्रीकहरू अनि परमेश्वरको मण्डलीका लागि ठक्करको कारण नबन, ३३ जसरी मैले पनि सबै कुरामा सबै मानिसहरूलाई खुसी पारिरहेको छु अनि आफ्नो होइन तर धेरै जनाको फाइदा खोजिरहेको छु, ताकि तिनीहरूले उद्धार पाउन सकून्‌।